Vula iifayile eziliqela kml kwiGoogle Maps - Geofumed
Vula ezininzi iifayile kml kwiGoogle Maps
Agasti, 2011 Google umhlaba / imephu
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndathetha malunga nendlela yokuvula ifayile ye-kml kwiGoogle Maps, ndiyazi indlela yayo apho ibanjwe khona.
Ngoku masibone oko kuza kwenzeka xa sifuna ukubonisa ezininzi ngexesha elinye.
1. Umzila we kml
Kule meko, ndiya kuyenza ngokubonisa ulwazi oluvela kwiNgingqi yeeNkcukacha zeeDolophu (i-Urban Information Information Centre)CIUR) njengomzekelo, ukwenzela ukuphakamisa amandla ayo. Umsebenzi onomdla, mhlawumbi owokuqala ukubonisa ulwazi malunga neTegucigalpa kwiGoogle Earth.
Kule meko, njengenkonzo ephakanyiswe njenge-iframe, kufuneka ucofe ngokukhawuleza ukuze ubone iipropati zekhowudi uze ubone i-IP apho ibanjwe khona. Emva koko khangela i html; xa kungenjalo i-intanethi eguqukayo njengoko kunjalo kule meko -kwaye ngexesha leposi- Ukuba idatha ayinakunikwa nge-wms okanye iifayile ezingagcinwanga kwisiseko sedatha, imizila yeekhilomitha ezili-kml / kmz ibonakala.
Le ndlela yokukhonza idatha ngethuba iguqulelwa kwisakhiwo esilula, ukukhusela iifayile ekukhutshweni ngendlela yeefayile ezicacileyo. Nokuba i-kml ingaqukatha isakhiwo se data, kodwa ezi zisetyenziswe njengeynchrone naluphi na uhlobo lwe-OGC i-Google Maps isekela.
2. Ukuthunyelwa kwiGoogle Maps
I-url ikopiwe kwi-Google Maps field field, enye enye, mhlawumbe kml okanye kmz iya kuboniswa kwimephu kwaye i-checklists ngakwesobunxele ingacinywa okanye ivuliwe. Uluhlu luboniswa ngophando olunye, kodwa lugcinwa kwimemori yomboniso.
Ukubonisa ukuba zivaliwe okanye zivaliwe ukusuka kwipaneli yokunene. Awukwazi ukutshintsha umyalelo, kodwa unokucima umgca uphinde ulayishe kwakhona umyalelo osifunayo.
Kwaye banako. Ngokomzekelo, imigca ephuzi iimpazamo ze-geological, umgca oluhlaza okwakuboniswa kwindandatho yesibini yomyinge kunye nokuluhlaza ukukhula okujoliswe kwiminyaka ye-20. Oku kunye nokunye kungaboniswa kuyo CIUR, esiyicinga ukuba liyilinyathelo elixabisekileyo ngokusasazwa, ukuqhubeka kunye nokusebenzisana kwabasebenzisi abanxulumene nomxholo okhuselekileyo kuya kuba ngumthombo obalulekileyo wokubonisana.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Windows Live Writer 2011
Post Next Ukunqoba iCaricature kwiNgqungquthela yeMfundoOkulandelayo "
Enye impendulo "Vula iifayile ezili-kml kwi-Google Maps"
I-Google ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise iGoogle Maps njengetemplate kwiiprojekthi ezikhethiweyo nezithandwa kakhulu. Kodwa i-Google inokuphumelela imfesane kubabasebenzisi abaninzi be-intanethi bavumela ukuguqulwa okubizwa ngokuba yiGoogle Maps Hacks.